Faarfannaa Adda Addaa | Aarsaa Kakuu Haaraa New Covenant Ministries
Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dheeraa fudhata
Faarfannaa Adda Addaa — 31 Comments
Nagaasaa on October 4, 2017 at 2:12 pm said:
Ammas itti daddabalee isin ha-eebbisu!!!!
XUURII ASAFFAA on July 19, 2017 at 9:56 am said:
XUURII ASAFFAA on July 19, 2017 at 9:51 am said:
BAGA WAAQAYYO ISINGARGAARE.
Dawit Ejigu Gelmo on May 26, 2017 at 5:40 am said:
Dhugumaan waaqayyo Waaqni Maccaa hojii keessan raawwatee ha eebbisu! Faarfannaa Phaawuloos lakkoofsa #1 argachuu kootti hedduun gammade…Eger Namoota hedduullee hirmaachisuun fuula kana akka gabbistan abdii guddaan qaba. Waaqayyo mullata keessan kana haa ballisu.
best architects in india on April 8, 2017 at 9:17 pm said:
Oliyadamanu on April 7, 2017 at 8:51 am said:
waaqayyoo guddaa isiin haa eebbisuuu ebiii waqaayyoo isiin haa qaqabuu ol gubba waqarraa
milkessa adisu on December 31, 2016 at 4:30 am said:
hundumayyuu dhaggafee baayyees itti gammadeera waaqqayyooo isinaa eebbisuu. ayyaana isaas isiniif ha kennu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nagaasaa on December 26, 2016 at 1:52 pm said:
Namoonni dirree kana akka kanati qopheessitan, Yasuus Gooftaan waaqa irraa tajajila keessan ha’eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa.
amsalu tamiru on November 26, 2016 at 2:17 pm said:
amsalu tamiru on November 26, 2016 at 2:16 pm said:
amsalu tamiru on November 26, 2016 at 2:14 pm said:
Ibsaa on November 18, 2016 at 12:50 am said:
Waaqayyo Waaqa Keenya! Warra hojii Gooftaaf dhamaatan hunda gatii qabdan, harka Mooticharraa!
abdii on October 27, 2016 at 7:58 am said:
gooftaan kallatti hundaan isin haa eebbisuu. isa itti waamamtaani bakkan ga’a isa yesuus xumuraa jedhe sana xumuraa yoo dadhabdaan labatatti dabrsaa.
Ermiyaas Mekonnin on October 22, 2016 at 4:54 am said:
Baay’ee Waaqayyo isin haa eebbisu Waaqayyo dhalootaaf dhaloota kaasa marsariitii akkasii qopheessitanii faaruulee nuti akka salphaatti argachuu hindandeenye,kan nama haaressaniin fi jireenya hafuura isa nuti Kristoosii wajjin qabnu tuttuqanii kaasan nuuf gumaachuu keessaniif baay’een isinitt gammada.
Si’achis faaruulee dagatamanniif kanneen haarawaa utuu gadi nuuf lakkistan toora marsariitii kana irrattis ta’u toora marsariitii haarawaa irratti yoo gadi lakkistan ammoo toora marsariitii keessanii nubeeksisaa!
Siyade on October 6, 2016 at 7:38 pm said:
Bayye Waqayyo guddise isin haa ebbisu. Fargannotan dhabee barbaada turen asiratti argadhe gamachuu koo akkan itti ibsuyyu hin beeku
Gabbisaa Gurmeessa on August 4, 2016 at 3:22 am said:
Golli sammuukoo waaqayyoof galata, isiniif jaalalaa fi kabaja of keessaa qabdi. Faarfannaa hunda akkasitti qindeessitanii tajaajila uummataaf kennuuf keessaniif eebbifama. Mul’anni isiniif haa dabalamu. Jabaadhaa fuulduratti deemuuf kana caalaa……….
Mokeolani on June 22, 2016 at 7:37 pm said:
Guddaa ebbifama gartuun marsitii kana dedicate gootaan! Baayyee kan nama dhibuu faarfannoota durf dabalatee kan hammaas collect gootani tajajiilu keessaan guddaadha. Garuu, yeroo tokko tokko website kessaan ni caba ykn ni badaa osoo baayyee secure tahee kana caalaa jedheen yaada. Dabalataan farfanna kana dura bahaan kan ergaa gurguddaa qabaan namaas eebbisaan osoo website kanarraattii feetani hawwii kooti, EEBBIFAMAA!
mamo galata on April 22, 2016 at 9:28 am said:
Haleluyyaa waaqayyoo gaariidha
fiqiruu waaqjiraa on April 6, 2016 at 6:45 am said:
Araarri gooftaa yesuus isiniif haa baay’atu!!! Faarsaa afaan oromoo akka aannanii nama qabbaneessu akkasii asiratti waan nu badhaastaniif baay’ee isin jaallanna!!
Ayizaak Bayyanaa on March 6, 2016 at 10:56 am said:
Waaqayyoo siin Haa Ebbisuu!!
Guchisa Shanko on February 11, 2016 at 7:39 am said:
REALLY YOU ARE THINKING FOR YOUR CHILDREN AND I GET MORE INFORMATION FROM YOUR SITE. CONTINUE.
gammachiisaa assabaa on December 11, 2015 at 2:51 pm said:
namatti tola, jajjabaa dha!
GARBAABAA FUFAA on August 29, 2015 at 6:20 am said:
AMMAYYUU IFA BIYYA LAFAA ISIN HAA TAASISU WAAQAYYO !!!
shumi regassa on August 14, 2015 at 8:35 am said:
shumi regassa on August 14, 2015 at 7:51 am said:
jecha hin qabu waaqa irraa eebbii Abbaa isiniif yaa baayyatu
ERMIYAAS MOKONNIN on August 8, 2015 at 1:18 am said:
BAAY’EE Waaqayyo isin haa eebbisu si’achitti kana caalaa faarulee dagataman kan durii audio dhaan gadi nuuf lakkisaa!
tesfaye lebu on July 29, 2015 at 8:31 am said:
jabadha jajabadha jireenyi adunya tana kontirata waan ta’eef waan rabii jalatu dalaga
kibru on July 14, 2015 at 3:33 am said:
Dereje Jabessa on June 26, 2015 at 9:13 am said:
chala Beyene on June 16, 2015 at 12:29 am said:
God bless you for your devotion
Nagaraa on June 10, 2015 at 3:34 pm said:
Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Gooftaanis baay`ee ittiin na jabeesse. Hin dagadhu! Yeroo xiqoof garuu faarfannoota kana dhabeen turee. Amma garuu deebiyyaan. Thanks Lord. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. Lubbuunkoo faarfannaan jirati. Bakka jirtaanitti eebbii fi eegumsi Yesus Kristos isiniif haa baay`atu. I love you my nation